March 2013 ~ Htet Aung Kyaw
(အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မနေ့က မတင်ဖြစ်လို့ ဒီနေ့မှတင်လိုက်ရပါတယ်)
မနက်ဖြန် ကျရောက်မဲ့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ဟာ ၆၈ ကြိမ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ သို့မဟုတ် အစိုးရအခေါ် တပ်မတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန် တော်လှန်ရေး ပန်းခြံမှာပြုလုပ်တဲ့ တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းအတွင်း ''အနီးဆုံးရန်သူကိုရှာတိုက်ကြ'' လို့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကိုအစွဲပြုပြီး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ထားရာကနေ မဆလ အစိုးရခေတ်မှာ တော်လှန်ရေးနေ့ သို့မဟုတ် တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး ပြက္ခဒိန်မှာ တရားဝင်ပြောင်းလဲထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။
တကယ်တန်းမြန်မာ့တပ်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ဖြစ် ပါတယ်။ ဟိုင်နန်းကျွန်းမှာစစ်ပညာသင်ပြီးပြန်လာတဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန် ကောက်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ သမိုင်းမှတ်တန်းတွေကဖေါ်ပြပါတယ်။ ထားပါ။ ကျနော်အဓိကတင်ပြ ချင်တာက တပ်မတော်သမိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့အနာဂတ် ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန် နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့ တပ်မတော်နေ့အခန်းနားအတွင်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဘယ်လိုမိန့်ခွန်းပြောမယ်ဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့ ဒီနှစ်တပ်မတော်ဟာ အယင်နှစ် ကတပ်မတော်နဲ့တောင် မတူတော့ဘူးလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ''ပြည်တွင်း ပြည်ပအဖျက် သ မားများအား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းကြ'' ဆိုတဲ့ နှစ်စဉ်ပြောနေကြ စစ်သွေးစစ်သံလွှမ်းတဲ့ မိန့်ခွန်းအစား ''ပြည်တွင်း ပြည်ပက အများပြည်သူနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးထူထောင်ကြ'' လို့ ပြောမလားဆိုပြီး မျှော်လင့် စရာ ရှိနေပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်တာအတွင်း၊ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါလီမန်ထဲရောက်လာပြီးကတည်းက အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ ပြောပုံဆိုပုံတွေဟာ အယင်လိုမဟုတ်ပဲ အတော်ကြီးကိုပြောင်းလဲလာနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခါ အယင်အစိုးရခေတ်က နိုင်ငံတကာရဲ့ ခရီးသွားခွင့် ဗွီဇာ ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဥရောပနဲ့ သြစတေလျခရီးစဉ်တွေအတွင်း လိုက်ပါ လေ့လာခွင့်ရတာက လဲ လတ်တလောထူးခြားမှုအဖြစ်မြင်မိပါတယ်။ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းလိုက်ခဲ့သလို သြစတေလျ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာလဲ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း လိုက်ပါခဲ့တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ သြစတေလျအစိုးရကနေ တိုက်ခိုက်ရေးမဟုတ်တဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကူညီတွေပေး မယ်၊ စစ်သံမှုးဆက်သွယ်ရေးပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ တခါ အမေရိကန်အစိုးရဖက်ကလဲ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အယင်နှစ်ကနဲ့မတူတဲ့ အ ချက်များစွာထဲက မြင်သာတဲ့ ထူးခြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းအခြေနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ဒီတနှစ်အတွင်း လုပ်လိုက်တဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် က နဲနဲနောနောမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတိုက်နေဆဲ KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တောင် ညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မနက်ဖြန်ကျင်းပမဲ့ တပ်မတော်နေ့ကနေ ရှေ့လာမဲ့နှစ်တွေမှာ တိုက်ပွဲဆင် စရာမလို သလောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အချင်း ချင်းတိုက်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် သမိုင်းတခု နိဂုံးချုပ်ခါနီးအချိန်လို့လဲ ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ တကယ်ကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်တခု တည်းတင်မကပါဘူး။ သူရဲ့တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက် ရန်သူတော်တွေဘ၀ကနေ လက်တွဲဖေါ်လက်တွဲဖက် မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားတဲ့ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်အားလုံး ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာဟာ ဒီ နှစ် တပ်မတော်နေ့မှာ စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အယင်နှစ်တွေတုန်းက စစ်ပွဲတွေအတွက် ကုန်ကျခဲ့တဲ့စစ်စရိတ်တွေကို ဒီနှစ်မှာတော့ တပ်မတော်အား စနစ်တကျ ပြန်လည်စုဖွဲ့တည်ဆောက်ရေး၊ တပ်မတော်သားတွေရဲ့သက်သာချောင်ချီရေး၊ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀ ကျော်အတွင်း ကျဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက် အလေးပေးစဉ်းစား သုံးစွဲသင့်တဲ့ အချိန်ရောက်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျနော်ပြောနေတဲ့ တပ်မ တော်ဆိုတာဟာ နေပြည်တော်က မြန်မာ့တပ်မတော်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တနိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက် ကိုင်တပ် အသီးသီးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်တချိန်ကပါဝင်ခဲ့ဖူး ABSDF ခေါ် ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာတောင် နှစ် ၂၀ ကာလ အတွင်း ကျဆုံး ၃၅၃-ဦး၊ သေဆုံး ၂၇၃-ဦးနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၃၉၉-ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၀၂၄-ဦးရှိတယ် လို့သိရပါတယ်။ နှစ် ၂၀ သက်တန်းသာရှိတဲ့ ABSDF မှာတောင် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုက ဒီလောက်ရှိနေပြီ ဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀ ကျော်ကာလတလျောက်လုံး တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့၊ ABSDF ထက် အင်အား ပိုများတဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်တွေမှာ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုစာရင်း ဒီထက်မက များမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်း လို့ရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရဆိုရင် ၂၀၁၁ နှစ်လယ်ကနေ ၂၀၁၂ နှောင်း ပိုင်းအထိ တိုင်းရင်းသားတပ်မတော် ၁၃ ဖွဲ့နဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ ABSDF အပါဝင် အခြား ၈ ဖွဲ့ကတော့ အခုထိ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါ တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်မတော် ၂၁ ဖွဲ့ရဲ့ ထိခိုက်ကျဆုံး ဒဏ်ရာရမှုစာရင်းဟာ မနဲ လှပါဘူး။ တခါ ဒီအဖွဲ့အားလုံးကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အကျအဆုံး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုက ၂၁ ဖွဲ့ရဲ့စာရင်းထက် ပိုများမယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။
အခု စစ်ပွဲတွေရပ်လို့ တပ်မတော်တွေ အသွင်သစ်တမျိုးပြောင်းရတော့မဲ့ အခြေနေမှာ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲ တွေအတွင်း ကျဆုံး သေဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို နှစ်ဖက်တပ်မတော်တွေက ဘယ်လိုမှတ်တန်း တင်ကြမလဲ။ ဘယ်လိုထောက်ပံ့မှုလုပ်ပေးကြမလဲ။ သူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက် ဘာလုပ်ပေးကြမလဲ။ ဒါ ဟာ ဒီနှစ်တပ်မတော်နေ့မှာ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အဆင့်အရေးတကြီးလုပ်သင့်တာကတော့ နှစ် ၆၀ ကျော်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ နှစ်ဖက်တပ်မတော်သားတွေအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းအတွက် အသက်ပေးကာကွယ်သွာသူ တွေအဖြစ် နှစ်ဖက်စလုံးက အသိမှတ်ပြုဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖက်က ကျဆုံးတဲ့ တပ်သားတွေလောက်ကိုပဲ သူရဲကောင်းဗိမာန်မှာ မှတ်တန်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီး အခြားပြိုင်ဖက်တပ်တွေ က ကျဆုံးသူတွေကို မေ့ထားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တချိန်က ရန်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့ သူသေ ကိုယ် သေ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ ဒီတပ်မတော်တွေဟာ အချင်းချင်းလက်တွဲပြီး ရှေ့ကိုချီ တက်ရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတော့ ငြိမ်းအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီက အာဇာနည်ဗိမာန်တခုကို ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ဆောက်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ သူ တို့ရဲ့တပ်ဖွဲဝင်တွေကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တန်းတင် အခန်းနားလုပ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထောက်ကြံ့နဲ့ သံဖြူဇရပ်ဖက်မှာတွေ့ရတဲ့ မဟာမိတ်စစ်သချိုင်းနီးပါး အုတ်ဂူတွေကို စနစ်တကျလုပ်ပေးထားတာ ဗွီဒီယို မှတ်တန်းထဲ တွေ့ရပါတယ်။ အခြားအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့တချို့လဲ အလားတူ အာဇာနည်ဗိမာန် တွေဆောက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေအတွက် ဒီလိုဂုဏ်ပြုမှတ်တန်းတင်သင့်သလို ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတိုရဲ့မိသားစုတွေ၊ နောက် တခါ ကိုယ်လက်အင်္ဂါထိခိုက်သွားသူတွေကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပြုစုစောက်ရှောက်ပေးသင့်ပါ တယ်။ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးရုန်းကန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ခွင့်ရရင် ပထမ ဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စဟာ ၈ လေးလုံးအတွင်းကျဆုံး သွားတဲ့၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ ''ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေ'' အတွက် အ မှတ်တရ အုတ်ဂူတွေ စိုက်ထူရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို စနစ်ဟောင်းကနေ စနစ်အသစ်ကိုပြောင်းချိန်မှာ၊ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လက် နက်သုံးတိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းရေးကနေ စားပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးခေတ်သစ်ဆီ ချီတက် တော့မှာမို့ တပ်မတော်တွေအသွင်ပြောင်းရတော့မဲ့အချိန်မှာ တချိန်က လက်နက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ယုံကြည်ချက်အတွက်ပေးဆပ်သွားသူတွေကို ကျနော်တို့ စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပေးဖို့ လို အပ်ပါတယ်။ ကျဆုံး ထိခိုက်သူတွေကို ဒီလိုဂုဏ်ပြုခြင်းဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရဲ့ လုပ် ငန်းစဉ်တခု၊ အတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကို ကုစားနည်းတခုဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်များအသွင်ပြောင်း ချိန်မှာ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခုလို့လဲ မြင်မိပါတယ်။ ။
4:48 AM Htet Aung Kyaw No comments
By Dawei Watch | Dawei, March 22 |
Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra left Dawei this early morning to Hang Kong by his private jet, an airport authority told Dawei Watch.
A group of businessmen believed to be from Malaysia led by Thaksin unexpectedly arrived Dawei yesterday morning and toured the islands along Maungmagun beach, one of the famous beaches in the region for at least 8 hours,apolice officer said.
According toapolice officer who take care of the Dawei deep sea port area, the group then got back to Dawei Deep seaport area around9PM and stay over night there.
Thaksin and the groups left the airport today in the morning. One of the three flights flied back to Hang Kong, one to Malaysia and the last to Bangkok, the airport authority added.
Local businessmen said that they think Thaksin is seeking to develop the tourism site around the Maungmagun beach especially on the islands the along the coastal area.
"We encourage to develop ecotourism site there rather than some sort of dirty industries", Htein Win of Dawei Regional Tourism company based in Dawei said.
Thaksin had visited Dawei at least three times in last two years.
9:25 AM Htet Aung Kyaw No comments
Dawei 1- 25-03-13 by Htet Aung Kyaw
Dawei-2-25-03-13 by Htet Aung Kyaw
9:53 PM Htet Aung Kyaw No comments
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 18 မတ်လ 2013 - 01:23 GMT၊
၈၈ မျိုးဆက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတခု ဒီနှစ်ထဲ ထွက်ပေါ်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးက ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲမှာ ပါဝင်ဖို့နဲ့ မြန်မာ့အပြောင်းအလဲတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မူဝါဒရေးရာ အကြံပေးတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရောက်နေတဲ့ ကိုဌေးကြွယ်က ဘီဘီစီနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လွှတ်တော်ရှိရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရပြီလို့ မပြောနိုင်သေးဘူး၊ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခြေကျအောင် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ၈၈ မျိုးဆက် တခုလုံးရဲ့ ရုန်းကန်အား တခုအနေနဲ့ စုစည်းဖို့ လိုနေလို့ နိုင်ငံရေးပါတီတခု အနေနနဲ့ ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ ကိုဌေးကြွယ်က ရှင်းပြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြည်ပရောက်၊ လက်နက်ကိုင်၊ ဒုက0x081ခသည်ဖြစ် စသဖြင့် တကွဲတပြား ဖြစ်ကုန်တဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအားလုံး မျက်မှောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲ ပါစေချင်တာဟာ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆန0x081ဒပါလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ဒီလို ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ လာနိုင်အောင်၊ ပါနိုင်အောင် အစိုးရကလည်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ဖြည့်စွက် ပြောပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ကိုဌေးကြွယ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မြို့တော် ဝါရှင်တန်မှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးတွေကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာဟာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မြန်မာပဲ ဖြစ်တယ်၊ မျက်မှောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေနဲ့စပ်လို့ ပြည်ပနေ မြန်မာတွေ အနေနဲ့ နည်းပညာ၊ ငွေကြေးနဲ့ တတ်ကျွမ်းထားမှုတွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည် မျှဝေနိုင်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ကိုဌေးကြွယ်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
စနေလင်း| March 18, 2013 | ဧရာဝတီ။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမြအေး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ယခုနှစ်အတွင်းတွင် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းစေရေးအတွက်သာ ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်နေပြီး လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီတခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန်ရှိသကဲ့သို့ အခြားတဘက်တွင်လည်း အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်လက် ထားရှိပြီး ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုမင်းဇေယျက ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်လိုသူများ ရှိနေပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကျော်လွန်မှ သာ ပါတီထူထောင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပြီး အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုမင်းဇေယျ က ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ၊ လွှတ်တော်ရှိရုံမျှဖြင့် ဒီမိုကရေစီရရှိပြီဟု မပြောနိုင်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအခြေတည်လာသော ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများ ကြောင့် လက်နက်ကိုင်နေကြသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ ဒုက္ခသည်များ အဖြစ် ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံး နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တွင် ပါဝင်စေလိုသော ဆန္ဒ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အားလုံးတွင် ရှိနေကြောင်း၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အင်အားစုများ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်လာစေရန် အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ဆောင် ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုဌေးကြွယ်က ဆိုသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့က နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ရန် ဆန္ဒရှိနေသည့်အပေါ် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများက ကြိုဆိုလိုက် ကြပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင် လာမှုက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသော အလားအလာများဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟု သုံးသပ်မှု များ ရှိနေသည်။
“ကျနော် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက် ကတည်းက ပြောဖူးပါတယ်။
သူတို့ကို နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်လာဖို့။ လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေးပါဝင်လာဖို့။ NLD ပါတီ ထဲကို ၀င်ချင်ဝင်၊ မ၀င်ချင်လည်း တလှေထဲမစီးနိုင်တာ တောင် တစ်ခရီး ထဲသွားဖို့ ပြောဖူးတယ်။ အခုလို နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ထဲထဲဝင် လာကြဖို့ရှိတာ ကြိုဆိုတယ်။ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ် ” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
1:20 AM Htet Aung Kyaw No comments
ထက်အောင်ကျော်| March 12, 2013 | ဧရာဝတီ။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ဟာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း ၂၅ နှစ်ပြည့်နေ့၊ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့လူပြောများနေတဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာ တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့နေ့၊ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကို စတင် မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီရေး လူထုအုံကြွမှု အစ ဖုန်းမော်က
ဒီနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရေးနေ့အဖြစ် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေက သတ်မှတ်ထားကြပြီး ကိုဖုန်းမော်ကိုလည်း ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ထဲက ပထမဆုံး သူရဲကောင်းတဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဖုန်းမော် ဘာကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတာလဲ။ ဒီကျဆုံးမှုအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ။ ဒီကိစ္စကို အမှန်တိုင်းသိရအောင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က တောင်းဆိုချက်ဟာ အခု ဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက်နေပြီလဲ။
”အခုထိ ဘာမှမရသေးဘူးလို့ ပြောရမှာပဲ။ ဖုန်းမော်အပါအ၀င် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်း ထိခိုက် နစ်နာခဲ့ရသူတွေအတွက် တရားမျှတမှုဖြစ်စေဖို့၊ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်စေဖို့ စစ်မှန်တဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဘာမှမရှိခဲ့သေးဘူး” လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က ကိုဖုန်းမော်နဲ့အတူ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်း တက်ခဲ့သူ ABSDF (မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး) ဒု ဥက္ကဌ ကိုမျိုးဝင်းက ပြောပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ မဆလ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ) အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ တခြားကျောင်းတွေဆီကိုပါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီး ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ ကျောင်းသားတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ တံတားနီအရေးခင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးတာဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ သေနတ်ကျည်ဆံကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အရပ်သားနဲ့ကျောင်းသား ရန်ဖြစ်ရာကနေရတဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာလိုက်ရာကနေ ကျောင်းသားထု တရပ်လုံး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး အခုလို အုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
တံတားနီ အရေးအခင်းဟာ တနိုင်ငံလုံးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေဆီ ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေကို လူစုခွဲနိုင်ဖို့ တက္ကသိုလ်တွေ အားလုံးကို အစိုးရက ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုမျိုးဝင်း အပါအ၀င် ကျောင်းသားအားလုံး ကိုယ့်ဒေသ အသီးသီးဆီ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ တခါ ဇွန်လမှာ ကျောင်း ပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲက တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းကို ကျော်ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်အထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေကို တခါ ထပ်ပိတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းသားတွေ စတင်လိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးက ကျေးလက်ဒေသအထိ ပြန့်နှံ့ သွားပြီး ၈ လေးလုံးအဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အုံကြွမှုကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းတဲ့အတွက် ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအတွက် တောခိုခဲ့ကြတာ အခုဆိုရင် ရာစုနှစ်တခုရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တခြားကျောင်းသား အတော်များများကတော့ ၁၉၈၉ ကတည်းက စစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချခံလိုက်ရတာ မနှစ် ဒီအချိန်ကမှ ထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာကြပါတယ်။
ABSDF အဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်အထိသွားပြီး လက်ရှိအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေချိန် မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် အကျဉ်းထောင် အသီးသီးကနေ လွတ်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် ဆောင်ရွက်နေချိန်၊ နောက်တခါ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ အပြီးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က ပါလီမန်ထဲအထိဝင်ပြီး အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ဖုန်းမော်ကိစ္စ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေး၊ အရင် အစိုးရခေတ်က တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးရေး တောင်းဆိုတာဟာ လက်တွေ့ကျပါရဲ့လား။ လက်ရှိ ရထားတဲ့ နားလည်မှုတွေပျက်စီးပြီး အစိုးရက နောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်သလား။
”ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီကိုပဲ သွားချင်ပါတယ်။ အရေးယူတဲ့ အပိုင်းကို ပထမ ဦးစားပေးနေရာမှာ မထားချင်ပါဘူး။ ဒါကို ပထမနေရာ ထားရင် ရှေ့မတိုးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အရေးယူတာက နောက်တပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” လို့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ စာမျက်နှာ ၁၇၈၊ အခန်း ၁၄၊ ပုဒ်မ ၄၄၅ ”အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလ ပြဌာန်းချက်များ” အခန်းမှာလည်း အစိုးရဟောင်းခေတ်က တာဝန်ရှိသူတွေကို “ပြန်လည်အရေးယူခွင့်မရှိစေရ” လို့ အတိအလင်း ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အရင်အစိုးရခေတ်က ကျုးလွန်ခဲ့သမျှ ပြစ်မှုတွေအားလုံးကို ဘာမှ အရေးယူခွင့် မရှိတော့ဘူးလား။ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာ ရှေ့နေတဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီး အခု ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် အာရှ လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ ဦးမင်းလွင်ဦးကတော့ ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အခု လောလောဆယ်ကတော့ မလွယ်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
”ဒီလို အရေးယူဖို့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက အားတက်သရော မရှိသလို လက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း နှုတ်ဆိတ်နေတယ်” လို့ ဦးမင်းလွင်ဦးက ထောက်ပြပါတယ်။ ” ၈၈ က ဖုန်းမော်ကိစ္စကို ခဏ ထားပါဦး။ မနေ့တနေ့ကမှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သံဃာ့အရေးအခင်းတို့၊ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းတို့တောင် ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလေ။ Report တွေထုတ်ပြီး ဒီအတိုင်း တန်းလန်းကြီး” လို့ သူက အားမလို အားမရနဲ့ ဆက်ပြောပါတယ်။
၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေတွေက အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး၊ အစိုးရဟောင်းရဲ့ လုပ်ရပ် အမှားတွေကို လက်ရှိအစိုးရက တာဝန်ခံဖြေရှင်းရေး အတွက် တောင်းဆိုနေပေမယ့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ပါမလာသေးတာကြောင့် လောလောဆယ်မှာတော့ သူတိုရဲ့တောင်းဆိုချက် အကောင်အထည် ပေါ်လာမယ့် အရိပ်လက္ခဏာ မမြင်ရသေးပါဘူး။
ဒါဆိုရင် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ လုပ်သလိုမျိုး တချိန်က အမှားတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေက ၀န်ချ တောင်းပန်ပြီး ကြေအေးရေးလုပ်ကြမလား။ တောင်အာဖရိကက ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူးကိုယ်တိုင် အခုလ အစောပိုင်းက ရန်ကုန်အထိလာပြီး သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေကို ဆွေးနွေးရှင်းပြပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်း အသီးသီးဆီက အခုချိန်ထိ သူတို့ရဲ့ သဘောထားတွေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာ ဘာမှမကြားရသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားကလည်း ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းပေးရေးဟာ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းပေါ်က အဖုအထစ်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုကြောင်း ဂျနီဗာကလာတဲ့ ရိုက်တာသတင်းတပုဒ်မှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရကရော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကပါ ဒီကိစ္စကို အရေးတကြီး ဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စတခုအဖြစ် ထည့်သွင်းထားတာ မတွေ့ရသေးဘူးလို့ ကင်တားနားက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင် ကိုဖုန်းမော် ၂၅ နှစ်ပြည့်မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ဆွမ်းကပ် အမျှဝေရုံ သက်သက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရမလား။ နှစ်ပတ်လည် ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကဖြစ်စဉ်ကို အမှတ်တရ စားမြှုပ်ပြန်ရင်း ပွဲပြီးသွားကြမလား။
အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်တော့ ၁၉၈၈ မတ်လက စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း စိုက်ထူခဲ့ပေမယ့် အစိုးရက ချက်ချင်း ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ကိုဖုန်းမော် အမှတ်တရ ကျောက်တိုင်ကို အခုချိန်မှာ တရားဝင် ပြန်စိုက်ထူသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစိုက်ထူခြင်းက ကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ၊ နစ်နာခဲ့ရသူ တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို အသိအမှတ်ပြု ကုစားပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်း တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ရှိအစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်က နားလည် လက်ခံလာအောင် ဆွေးနွေးတင်ပြသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရှေ့ရက်တွေမှာ ဆက်တိုက် တံတားနီအရေးအခင်းအတွင်း ကျဆုံးသူတွေ၊ ဇွန်လ အရေးအခင်း၊ သြဂုတ်လအရေးအခင်း၊ စက်တင်ဘာအရေး အခင်းတွေအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအသီးသီးမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် အမှတ်တရ ကျောက်တိုင်တွေ တည်ဆောက်ရေးကို ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ၊ နစ်နာခံစားခဲ့ရသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဆီ သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးစကားပြောသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ကုစာပေးခြင်းဟာ ကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ၊ နစ်နာခဲ့ရသူတွေအတွက် တစုံတရာ အသိမှတ်ပြုရာ ရောက်သလို လက်ရှိသွားနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လမ်းကြောင်းကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
1:14 AM Htet Aung Kyaw No comments
By HTET AUNG KYAW / THE IRRAWADDY| March 12, 2013 |
ဘာတီးလင့်တနာ Bertil Lintner - ဒေါမာန်ဟုန် Outrage Burma by api_user_11797_သာထူး
Scribd ပေါ်မှာ သာထူး တင်ထားတွေ့လို့ ဖုန်းမော် ၂၅ နှစ်အမှတ်တရအဖြစ် ထပ်မံကူးယူ တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (စကင်ဖတ်ထားတာ သိပ်ကွာလတီမကောင်းပါ။ မူရင်းစာအုပ်ရှိသူများ က ဒီထက်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖတ်နိုင်အောင် ထပ်မံကူးယူတင်ပြသင့်ပါသည်)။